Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọrịa COVID dị ugbu a na Ebe ezumike Ezumike
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem n'oge COVID-19 pụtara na ịkwesịrị ịdị njikere maka ihe ịtụnanya na mgbanwe na-eme ngwa ngwa. Dabere na ọnụọgụ taa, ọnụọgụ ọrịa na
Ebe ndị dị n'akụkụ osimiri na -esite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 12,000 ruo efu dabere na ọnụego ọrịa ugbu a na ebe mmekọrịta dị n'etiti nde mmadụ 1.
Ụfọdụ ebe osimiri n'akụkụ ụwa na -emepe ọzọ maka njem na njem, ụfọdụ bụ maka ndị njem ọgwụ mgbochi.
Ọtụtụ ndị njem na -achọ izu ike n'ụfọdụ osimiri ndị ama ama n'ụwa, mana ha chọrọ ịnọ na nchekwa na ahụike.
Na -elele mmachi njem na dabere na data si Ụwa, eTurboNews jikọtara ndepụta. Ọ na-enye ụfọdụ ntinye na ọkwa COVID-19 dị ugbu a
O siri ike ileba anya na ezigbo ọnụọgụ. Obere obodo n'ezie nwere ọnụọgụ dị ala ma e jiri ya tụnyere nnukwu mba.
Na ntụnyere a, eTurboNews dabere na ibu ikpe ugbu a maka ụbọchị asaa gara aga nke COVID-7 n'ihe metụtara nde mmadụ 19. A na -agbakọta mba ndị na -erughị nde mmadụ 1 n'usoro ha chere na enwere otu nde mmadụ.
Dabere na ọnụọgụ a British Virgin Islands nwere ikpe COVID-11,989 dị ugbu a na-arụ ọrụ n'ime ụbọchị 19 gara aga, yiri ka ọ bụ oke osimiri nwere nnukwu ihe ịma aka, ebe Oman nwere ikpe efu nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị nchebe onye ọ bụla nwere ike zuru ike n'ụwa.
Enweghị nọmba anwansi, yana ihe ndị ọzọ na -arụkwa ọrụ, mana ebe ndị na -erughị ọrịa 1000 kwa nde ga -emepe nhọrọ oke osimiri maka ndị nwere ike ịga njem n'enweghị nsogbu.
Dịka ọmụmaatụ Caribbean bụ mpaghara ebe enweghị agwaetiti na ibe ya. Obodo Virgin Islands nke Britain nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa 12,000 kwa nde, ma e jiri ya tụnyere Grenada nwere ọnụ ọgụgụ kacha ala na Caribbean nwere naanị 27. Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri gụnyere. Bahamas, Jamaica, St.Lucia, ma ọ bụ Dominican Republic nọ n'ime otu mba enwere ike ịhụ dị ka obere ihe egwu.
Oké osimiri Oman, COVID kacha ala nke ọ bụla n'akụkụ osimiri: ZERO
Na Seychelles, ọnụọgụ ọrịa ọhụrụ gbadara 8% n'izu gara aga, mana enwere ikpe 555 na -arụ ọrụ na mba 98,000+, enwere ike ịhụ ọnụego ahụ ka ọ dị elu. Saịprọs, Martinique, Cuba, ma ọ bụ Spain nọ n'ọnọdụ yiri nke ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ikpe COVID na -arụ ọrụ kwa nde na ebe ezumike osimiri
site na elu ruo na ala:
British Virgin Islands: 11,989
Ndị Maldives: 1,473
South Africa: 1,401
Trinidad na Tobago: 1,033
Mba Israel: 904
French Polynesia: 708
Ọnwa Montenegro: 699
Ndị Turks & Caicos: 407
Perlite na Adriatika:
Vincent & Grenadines: 99
Sao Tome na Ụkpụrụ: 63